ကုလား၊ ဦး (1724)။ မဟာရာဇဝင်ကြီး (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်)။ 1–3 (2006, 4th printing ed.)။ Yangon: Ya-Pyei Publishing။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
ပန်းလှ၊ နိုင် (1968)။ ရာဇာဓိရာဇ် အရေးတော်ပုံကျမ်း (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်) (8th printing, 2005 ed.)။ Yangon: Armanthit Sarpay။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
တော်ဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ကော်မရှင် (1832)။ မှန်နန်းရာဇဝင် (Burmeseဘာသာစကားဖြင့်)။ 1–3 (2003 ed.)။ Yangon: Ministry of Information, Myanmar။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တလမေဒေါ&oldid=728130" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။